Primary kunyatsoshanda Sefa Fekitori | China Chekutanga Kushanda Sefa Sevagadziri, Vatengesi
ese-esimbi mambure epamhepo mweya firita
Kune firita yezvinhu, kune simbi isina simbi yakarukwa kana aruminiyamu kuruka kwema multi-layer vertical uye yakatwasuka mafungu emuchinjikwa. Saizi yakaenzana yehukuru ndeye 1 inch uye 2 inches. Zve furemu zvinhu, unogona kusarudza isina simbi furemu kana aluminium furemu iyo inokodzera maindasitiri emhepo michina ine yakaderera kumanikidza kurasikirwa uye yakakwira guruva muunganidzwa. Izvo zviri nyore kuchenesa uye kuchengetedza, kuchengetedza mari.
bepa bhokisi kadhibhodhi furemu yekutanga synthetic fiber mhepo firita
Sefa inoshandisa nyowani yekugadzira faibha uye girazi faibha seye firita zvinhu, mushure mekupeta, ine yakanyanya kusefa firita, yakakwira guruva kubata chinzvimbo, yakaderera kuramba uye zvimwe zvinhu. Inoshandiswa zvakanyanya mukutsva kwemhepo kuburitsa mweya yekuchenesa mweya-kutonhodza sisitimu, yekuchenesa mweya sisitimu uye yekumwaya nyowani yemhepo yekupa system, inogona zvakare kushandiswa seyakafanogadzira-firita yepakati kunyatsoshanda firita yekuwedzera hupenyu hwayo hwebasa. Kazhinji tembiricha yayo yekushandisa iri pasi pe93 degrees.
inogona kuchinjika aluminium furemu yekutanga pre mweya firita
Sefa inoshandisa polyester nyowani nyowani senge firita zvinhu, mushure mekuumba, ine yakanyanya kusefa kusefa, guruva rakakura rekubata chinzvimbo, uye yakaderera kuramba neyakagadziriswa firita, yakaderera mashandiro emari uye zvimwe zvinhu.